BOOK REVIEWS – Institute for Strategy and Policy – Myanmar
ယခုအညွှန်းသည် Seth G. Jones, Waging Insurgent Warfare. Lessons from the Vietcong to the Islamic State, New York: Oxford University Press, 2017 စာအုပ်ကို ဝေဖန်သုံးသပ် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ သောင်းကျန်းသူဆန့်ကျင်ရေး စစ်ဆင်ရေးတွေအပေါ်လေ့လာမှု (COIN) ဟာ၊ ၂၀ဝ၃ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ တကျော့ပြန် ခေတ်စားလာပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အမေရိကန် ပြည် ထောင်စုနဲ့ ၎င်းရဲ့မဟာမိတ် အနောက်နိုင်ငံတပ်ဖွဲ့တွေက အီရတ်နဲ့...
ကွန်မြူနစ်လွန် နိုင်ငံများတွင် အာဏာရှင် ခေါင်းဆောင်များကို အနိုင်ယူ ဖယ်ရှားခြင်း
By Hnin Wint Naing
Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries by Valerie Bunce and Sharon L. Wolchik Valerie Bunce နှင့် Sharon L. Wolchik တို့၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထုတ် Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries စာအုပ်ဟာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပခဲ့သော ကွန်မြူနစ်လွန် ရွေးကောက်ပွဲများအကြောင်းကို လေ့လာ သုံးသပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကွန်မြူနစ်လွန် နိုင်ငံပေါင်း ကိုးနိုင်ငံတွင် ဖြစ်စဉ်...
စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ကချင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှု (၁၉၉၄-၂၀၁၁) သုံးသပ်ချက်
မန်ဒီဆေဒန်၊ အယ်ဒီတာ၊ မြန်မာနယ်စပ်ဒေသများရှိ စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ကချင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှု (၁၉၉၄-၂၀၁၁) သုံးသပ်ချက် ၂၀၁၆၊ စာမျက်နှာ ၅၁၇။ ဒေးဗစ်စကော့မက်သီဆင် ၁ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ် ဖြစ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားမလိုအားမရ ဖြစ်ရမှုက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကို ရှိနေတာပါ။ အရင်တုန်းက ရခဲ့တဲ့ ကချင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မန်ဒီဆေဒန်က တည်းဖြတ်ထားတဲ့...
အကြမ်းမဖက် တော်လှန်ရေးများ၊ အာဏာရှင်နိုင်ငံများရှိ ပြည်သူ့အာဏာ လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်း
အကြမ်းမဖက် တော်လှန်ရေးများ (အာဏာရှင်နိုင်ငံများရှိ ပြည်သူ့အာဏာ လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်း) Unarmed Insurrections: People Power Movements in Nondemocracies. Kurt Schock. Minneapolis, MN: The University of Minnesota Press, 2005. 228 Pages. အာကာဟိန်း ၁ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များ မတိုင်မီ အချိန်အထိ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုဟု ဆိုလိုက်ရင် အများအားဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ ရင့်ကျက်ပြီးနိုင်ငံများ တစ်နည်းအားဖြင့်...
စပ်ကြားအုပ်စိုးမှုစနစ် နိုင်ငံများ၏ ဆန္ဒပြမှု၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ကွန်မြူနစ်အလွန် ရုရှားနိုင်ငံ၏ လူထုသဘောထား ကွဲလွဲမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံ “The politics of protest in hybrid regimes: managing dissent in post-communist Russia, Graeme Robertson. New York, Cambridge University Press, 2011.” ဆုမွန်သဇင်အောင် ၁ ဒီဆောင်းပါးဟာ ပါမောက္ခ ဂရေမီရိုဘင်ဆန် (Graeme Robertson) ရဲ့ “The...